समाचार Archives - Page3of 54 - Nepal News, News from Nepal, Online News from Nepal, Nepali News, Political, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Credit, Vehicle, Bank, Entertainment, Nepali Movie, Songs, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, Nepali Filmi News, Poems, Business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale
शिव जी को प्रसाद भनि खाईने भाङ धतुर मानबिय जीवनका लागि कत्तीको शारीरिक र मानसिक असर पर्छ ?
काठमाडौं– आज शिवरात्री । गाँजा र भाङलाई ‘शिवको प्रसाद’ भन्दै ग्रहण गर्नेको सँख्या ठूलो हुन्छ । गाँजा खाएर आफूलाई भक्त कहलाउने उपक्रममा एकथरी हुन्छन् भने आफूलाई शिवजस्तै शक्तिशाली महशुस गर्ने अर्काेथरी । यसबाहेक परम्पराको निरन्तरता स्वरुप ग्रहण गर्ने धेरै हुन्छन् । त्यसैले अन्य समय यसको प्रयोगमा प्रहरी प्रशासनको कडा निगरानी रहेपनि आजको दिन अघोषित छुट…..
‘लिभ इन रिलेसनसिप’ बारे हामी अनभिज्ञ छैनौं । किनभने हामीकहाँ पनि यस किसिमको प्रचलनले व्यापकता पाउँदै गएको छ । लिभ इन रिलेशन पश्चिमा संस्कृति हो, जसको राम्रो /नराम्रो दुबै पक्ष छन् । राम्रो पक्ष भनेको बिहेका लागि परिपक्क हुने मेलो हो यो । बिहे नगरी पार्टनरसँग बस्दा दाम्पत्य जीवनका बारेमा धेरै कुरा सिक्ने अवसर मिल्छ…..
सिलवाललाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्ने क्षमता कति ? कहाँ छन् उनी ? हेर्नुहाेस्
जनताबाट अनुमोदित भएपछि यतिबेला अधिकांश सांसद जनताको बीचमा छन् । विकास र समृद्धिका लागि अनेक योजनाहरु बुनिरहेका छन् । तर, झण्डै तीस बर्षसम्म जनताको पहरेदार बनेर अब्बल प्रहरी अधिकृतको छवि बनाएका नवराज सिलवाल यतिबेला आफै न्यायको खोजीमा भौंतारिएका छन् । अझ आफ्नै देश ‘असुरक्षित’ भएपछि उनले सुटुक्क विदेशको साहरा लिनुपरेको छ । उनीसँग प्रहरी महानिरीक्षकको…..
Page3of 1 « Previous 12345 … 54 Next »